Ama-distros amahle kakhulu we-netbooks | Kusuka kuLinux
I-distros ehamba phambili yama-netbook
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | I-UseLinux yeFayileLet, Ukusatshalaliswa
Ngokungafani neWindows noma iMac, iLinux inezinhlobonhlobo zokusatshalaliswa ezisebenzisa izindawo ezahlukahlukene zokuqhafaza nezinhlelo zokusebenza ngokwakhona. Lezi zinhlanganisela zenza amanye ama- "distros" abe lula kunezinye noma ukuthi amanye awo alungele kangcono umsebenzi othile noma uhlobo oluthile lwehadiwe, njengama-netbook. Uhlu esabelana ngalo ngezansi aluhloselwe ukukhawulela; kunokusatshalaliswa okuningi okuningi okungasebenza ngokuphelele kwi-netbook. Simane sikukhuthaze ukuthi uphakamise lezo, ngokubona kwethu, ezihamba phambili noma lezo ezazenzelwe ngqo ukusetshenziswa kuma-netbook.
1 Izici eziyinhloko ze-netbook
2 Izici ze-netbook distro enhle
3 1. I-JoliOS
4 2. ULubuntu
5 3. IBodhi Linux
6 4. I-Crunchbang
7 5. IMacPup
8 6. UManjaro
10 8.Zorin OS Lite
11 9. ISolidX
12 10. I-Google Chrome OS
Izici eziyinhloko ze-netbook
Ukugcizelelwa kukuthwala kwayo (inesisindo esincane futhi ngokuvamile inempilo yebhethri ende).
Ngoba amandla "ukuhamba" kwayo, incike kakhulu ekuxhumaneni okungenantambo (i-wifi, i-bluetooth, njll.)
Inenani elilinganiselwe le-RAM, imvamisa i-1GB / 2GB.
Izici ze-netbook distro enhle
Izici ezichazwe ngenhla zenza kudingeke ukuthi ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux esizikhethele kona kube namaphuzu "aqinile" alandelayo:
Ukuthi ayidli ibhethri eliningi futhi, uma kungenzeka, isebenzisa inombolo enkulu kunazo zonke yezindlela zokonga ugesi.
Ukuthi azikho izinkinga ngokutholwa kwe-wifi noma i-bluetooth.
Lokho kudla i-RAM encane.
Ukuthi ine-interface "entofontofo" nokuthi ilingana nosayizi wesikrini (omncane) esivame ukukuthola kwi-netbook.
I-Jolicloud isuselwe ku-Ubuntu, kepha yenzelwe ukusebenza kumakhompyutha anezincazelo ezilinganiselwe ngokwamandla wediski, inkumbulo nosayizi wesikrini. I-interface ebonakalayo (i-HTML 5 + GNOME) ifana naleyo yethebhulethi futhi ivelela ijubane layo nokusetshenziswa okuphansi kwemithombo. Njengoba kungabonakala kusikrini-skrini, i-JoliOS ihlose kakhulu ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza zewebhu (isitayela se-ChromeOS), esisebenzisela iMozilla Prism. Kunoma ikuphi, kungenzeka ukufaka izinhlelo zomdabu, njengesidlali sevidiyo seVLC, futhi yize kungasho ukuthi le distro izokhama lonke ijusi uma sixhunywe kwi-Intanethi, kungenzeka ukuyisebenzisa ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Ekugcineni, kufanele kuqashelwe ukuthi kungenzeka ukufaka i-JoliOS ngaphakathi kweWindows noma Ubuntu (beta) njengokungathi kungenye nje yohlelo lokusebenza, efanelekile kulabo abafuna ukuyihlola ngaphambi kokuyifaka ekugcineni.
Kuyi-distro esekwe ku-Ubuntu esebenzisa imvelo yedeskithophu ye-LXDE. Kugqame ukusetshenziswa kwayo okuphansi kakhulu kwezinsizakusebenza nokufana kwesibonisi sayo esibonakalayo naleso se-WinXP esezingeni eliphezulu manje, okwenza ikhange kakhulu kulabo abathatha izinyathelo zabo zokuqala ku-GNU / Linux.
Yize wonke ama-distro asuselwa ku-LXDE anconyelwa kakhulu ama-netbook, ngokungangabazeki uLubuntu ungcono kakhulu kwabasanda kufika, hhayi kuphela ngenxa yokufana kwesibonisi sayo esibonakalayo naleso seWinXP, njengoba sesibonile, kodwa futhi ngoba sabelana ngokufanayo umphakathi omkhulu we-Ubuntu, okwenza kube lula ukuxazulula noma iyiphi inkinga engavela.
3. IBodhi Linux
Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux okusebenzisa ithuba eligcwele lomphathi wewindi le-Enlightenment. Eqinisweni, kungenye yezabelo ezimbalwa ezisetshenziselwa ukukhanyiselwa. Kuza, ngokuzenzakalela, ngesethi encane yezinhlelo zokusebenza ezifana nesiphequluli, isihleli sombhalo, ithuluzi lokuphathwa kwephakeji, njll.
Ngokuqondile, i-minimalism ingenye yemibono ngemuva kweBodhi Linux, yingakho kunganconyelwa abafikayo, yize kunconyelwe labo abanolwazi oluthile kwiLinux. Into ekhanga kakhulu ngale distro isivinini sayo esehlukile nezidingo zesistimu ephansi kakhulu, ngenkathi ihlinzeka ngesipiliyoni sedeskithophu esimnandi kakhulu, esisebenziseka kalula futhi esenziwe ngezifiso.
Landa iBodhi Linux
Kususelwa ku-Debian futhi kusebenzisa umphathi wewindi le-Openbox. Lesi sakhiwo senzelwe ukunikeza ibhalansi enhle kakhulu phakathi kwejubane nokusebenza. Izinzile njengoDebian uqobo, ngaphezu kokufaka ngokuzenzakalela isikhombimsebenzisi esincane nesesimanje esingenziwa ngezifiso kalula, sikwenze kube ngcono kumaqembu anezinsizakusebenza ezinqunyelwe.
Angenzi ihaba ukusho ukuthi kungenye yezabelo ezinhle kakhulu ze-GNU / Linux ezitholakalayo okwamanje.
Kuyi-distro esekwe ku-Puppy Linux kepha isebenzisa amaphakheji we-Ubuntu. Inemvelo yedeskithophu enobungani futhi inezici ezithile eziyenza ibonakale (yize isekude kakhulu) ye-Mac OS X.
IMacpup iza ngokuzenzakalela inezinhlelo zokusebenza ezikhanyayo ezimbalwa, ezifana ne-AbiWord, Gnumeric, SeaMonkey ne-Opera. Imenenja yewindi esetshenzisiwe, futhi, i-Enlightenment, evelele ukusebenza kwayo okuhle kwemidwebo ngezinsizakusebenza ezimbalwa zohlelo.
Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux okususelwa ku-Arch Linux, ukusatshalaliswa okunconyelwe ikakhulukazi abasebenzisi abasezingeni eliphakeme, kepha kunesethi yayo yokugcina. Ukusatshalaliswa kuhlose ukusebenziseka kalula ngenkathi kugcinwa izici ze-Arch, ezifana nomphathi wephakeji lePacman kanye nokuhambisana kwe-AUR (Arch User's Repository). Ngaphandle kwenguqulo eyinhloko ene-XFCE kunenguqulo esemthethweni (elula) esebenzisa imenenja yefasitela le-OpenBox. Kukhona nezinhlelo zomphakathi ezisebenzisa i-E17, MATE, LXDE, Cinnamon / Gnome-Shell, ne-KDE / Razor-qt.
IManjaro ivelela ubulula nokushesha kwayo, ifaka amandla we-Arch Linux lapho kufinyeleleka kumsebenzisi "ojwayelekile / othuthukile".
Luhlelo lokusebenza "olususelwa emafini" oluza ngokujwayelekile ngokunezinhlobonhlobo ezinhle zezinhlelo zokusebenza zewebhu. Kususelwa kuLubuntu futhi kusebenzisa imvelo yedeskithophu ye-LXDE.
Ngokungafani nokunye ukusatshalaliswa kwe- "web-centric", okufana ne-ChromeOS noma i-JoliOS, i-Peppermint ine-interface enobungani kakhulu kulabo abavela ku-Windows futhi bakhetha imenyu yakudala ye- "Start".
8.Zorin OS Lite
Ngokuyinhloko iZorin OS yenziwa ukulingisa ukubukeka kwezinye izinhlelo zokusebenza. Ungakhetha iWindows 2000 noma iMac OS X. Kubasebenzisi beWindows le distro inikeza ukubukeka okujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, kulula kakhulu ukuyisebenzisa, noma ngabe iza nezinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezifakwe ngokuzenzakalela.
I-SolydX (XFCE) ingukukhishwa okugoqeka okususelwa ku-Debian. Inhloso yalo ukuthi kube lula ukuyisebenzisa, ukuhlinzeka ngemvelo ezinzile nephephile. Uhlobo olunconyiwe lwama-netbook lisebenzisa i-XFCE njengemvelo yedeskithophu, yize ikhumbuza i-KDE. I-SolydX isebenzisa umphathi wenethiwekhi ye-wicd ku-inthanethi futhi iza ne-flash ne-MP3 codecs efakwe ngokuzenzakalela. Ngaphezu kwalokho, kufaka phakathi izinhlobo ezinhle zezicelo ezingasindi: IFirefox, i-Exaile, i-VLC, i-Abiword neGnumeric.
10. I-Google Chrome OS
Uhlelo lokusebenza "lwe-web-centric", olususelwa kusiphequluli segama elifanayo ne-Linux. Yisistimu esetshenziswa kuma-Chromebook aya ngokuya ethandwa kakhulu.
Elinye lamaphuzu iGoogle eligqame kakhulu kuwo ijubane lohlelo, nesikhathi sokuqalisa semizuzwana engu-8 nesikhathi sokucisha esifushane, ngaphezu kwejubane evula ngalo izinhlelo zalo zokusebenza zewebhu. Yonke imibhalo, izinhlelo zokusebenza, izandiso, nokulungiselela kwenziwa isipele online ngaphansi komqondo we-cloud computing. Ngakho-ke uma umsebenzisi elahlekelwa ngumshini wakhe, angathola omunye noma afinyelele komunye umshini, futhi athole imininingwane efanayo naleyo ayeyigcine ngaphambili.
Njengoba sibona ezweni le-software yamahhala kunezinketho eziningi zama-netbook. Kufanele kucaciswe ukuthi ukwabiwa okukhulunywe lapha akubekwanga ngokulandelana kokuthandwa. Eqinisweni, ukusatshalaliswa okuhle kakhulu kuzoba okufanelana kahle nezidingo zalowo nalowo futhi ngokusobala kuyehluka. Ngokuvamile, ngincoma u- "newbies" ukuzama uLubuntu, Crunchbang noma iMacPup, ngenkathi "othuthukile" engazama iManjaro noma iSolydX.
Ekugcineni, ngingajabula bonke abasebenzisi balawa ma-distros abangasithumela imibono yabo ukuze lokhu kungena kucebe futhi kube lusizo kakhulu kulabo abane-netbook futhi abacabanga ngokushintsha i-Operating System.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-distros ehamba phambili yama-netbook
Amazwana ayi-121, shiya okwakho
Ngafaka i-debian ku-netbook yami. Ngikhohlwe ngokuphelele ukuzama i-Chrome OS> - <haha
ULeon Jl kusho
nokuthi yikuphi kulawa ma-distros owancomayo ngeCompaq Presario okusha kulokhu futhi uma ngifuna ukushintshela ku-linux
Phendula uLeon Jl
Sawubona, zama futhi uzame iManjaro noma uLubuntu.
Nge-64-bit Manjaro XFCE (ilaptop yami ine-6GB ye-RAM) ilaptop iyashisa kakhulu, ngazama ukusebenzisa iDota 2 futhi yashisa kakhulu yaze yagcina ivaliwe.
Kungenzeka kungenxa yezinkinga zehadiwe, akudingeki ukuthi kushise kakhulu ngaphandle kokuthi ubeka umzamo omkhulu ku-processor, engingacabangi ukuthi. Zama i-linuxmint xfce 64 bit. Yilokho engikusebenzisayo futhi kungifanela ngokuphelele. Endabeni yokuqhubeka nokushisa ngokweqile, ngincoma ukuthi uhlanze i-pc yakho futhi ushintshe unamathisela oshisayo. Sanibonani kanye nenhlanhla!
yinde futhi ijika ngendlela efuna ukusatshalaliswa okufanelekile. Ngivivinye okungenani ama-distros ayi-10 futhi ukushisa kwe-laptop kubi kabi. akuyona inkinga yehadiwe, yinkinga ye-linux, nenkinga eyaziwayo. Ngizamile ubuntu, lubuntu, xubuntu, kubuntu, debian mate, debian kde, debian xfce, crunchbang (bunsen), crunchbang ++, linuxmint kde, linuxmint mate (owokugcina nguyena oshisa kakhulu, kepha nokho angawi ngaphansi kwama-70) . Okuwukuphela kwe-distro engashisi ngeKali, kepha uKali angifuni ukuthi uKali abe yi-distro eyinhloko, ngifuna okuthile okunethezekile futhi okunzima kakhulu. Ngizozama i-solydx ukubona ukuthi ngiqhuba kanjani
ULuis Miguel Mora kusho
Kunoma iyiphi i-Ubuntu-based distro install cpufreq bese uyibeka kumodi ye-PowerSave, ngaleyo ndlela izogcina ukusetshenziswa kweprosesa iphansi futhi ngeke kushise (futhi faka i-psensor ukuqapha izinga lokushisa kwakho)
Phendula uLuis Miguel Mora
Yisiphi isistimu yokusebenza ye-linux ongayincoma ku-acer aspire, hhayi i-netbook. Ngifuna isheshe kancane ngoba ukukhuluma iqiniso kuhamba kancane
UGustavo Ramirez kusho
Ngivivinye ama-distros ama-3 nge-HP Mini 110 enesikrini esingu-10.1 inch.
Ukuphela kwesidingo ebenginaso ukuthi abashayeli bezintambo basebenze ngaphandle kokwenza lutho kuwo, uma abashayeli bezintambo abasebenza ungalungisa noma yini, akunjalo? 😉
I-Crunchbang: Engikuthandayo kakhulu selokhu ngiyizamile, ngokususelwa ku-Debian ilula kakhulu, iyisixhumi esibonakalayo esincane, ngakho-ke ungalindeli wonke ama "eye-candy" avela kwamanye ama-distros, kwi-netbook kuhle kakhulu ukuthi into embi ukuthi kubiza kancane Ngisebenza ukuyilungiselela, cishe konke ukucushwa kufanele kwenziwe kumafayili wokumisa, okuhle ukuthi kuletha ama-launcher alawa kumenyu. Okubi ukuthi i-wireless ayisebenzanga okokuqala. Inzuzo yalokhu ukuthi uma ukwazi ukukuxhuma ngekhebula le-ethernet, ungafaka yonke into ngaphandle kwenkinga, iletha iskripthi sokuqalisa esilayisha izinhlelo zamanje nabashayeli, i-multimedia, njll.
I-EasyPeasy: Lokhu kusatshalaliswa kufanele kube okukhethekile kuma-netbook, ngakufaka, futhi kubukeka kukuhle, angizange ngikunike isikhathi esiningi sokukuhlola ngoba i-wireless yami yayingasebenzi okokuqala.
I-OpenSUSE 12.1 (Gnome): Le distro iyona engiyifakile, umshayeli ongenantambo wasebenza ngaphandle kokwenza lutho kuyo, ngafaka i-Chrome nama-codec multimedia futhi isebenza ngaphandle kwenkinga.
Njengoba ushilo, le netbook yenzelwe ukubheka i-inthanethi, imeyili, i-LibreOffice, njll. futhi nge-OpenSUSE kuyangisebenzela. Ngaphezu kwakho konke, i-GNOME 3 yinhle, ngiyithanda kakhulu kune-2
Phendula uGustavo Ramirez
Bengisafuna into efanayo, ngazama uLubuntu, Elementary OS Luna ne-beta 1 kanye ne-2 yeFreya ne-Deepin Linux. Ukuphela kwe-distro eyaqala ukuthola ikhadi le-wi-fi kwakungu-Deepin Linux, kepha kwakukhona izikhathi lapho yayihamba kancane. Ku-OS yamabanga aphansi kufanele uyisebenzise ngoba ukuba ngumshayeli ophethe akukufaki ngokuzenzakalela, iLubuntu yindaba ehlukile futhi kufanele usebenze kanzima ukufaka umshayeli !!! ...
abafana ... i-netbook nencwajana yokubhala ... kwehlukile ... ungalenzi iphutha ... incwajana incane ... ngakho-ke akuwona wonke ama-distros ajwayela isikrini se-approx 11 inches ... ngokwesibonelo ... nge-ubuntu 12.04 ... konke Kulungile .. kepha uma kuvulwa iwindi lezinketho ezifana nokushintsha isithombe sangemuva noma okunye ... ingxenye engezansi yewindi ifihliwe futhi ezinye izinkinobho ezifana nokwamukela noma ukukhansela (kuya ngecala) azikwazi ukuchofozwa ... naku izinketho zesikrini inketho eyodwa kuphela evelayo ... ngaphandle kokushintshwa ... ngiyizamile nge-notebook msi, hp kanye ne-acer ... futhi ngakho konke lokhu kuyafana ... futhi ps uma wazi noma yini ehambelana nesikrini sencwajana ungazise. ungabi ngama-gachos ... imikhonzo ..
I-netbook yikhompyutha encane enama-intshi angaba ngu-10 wesikrini
Incwajana yikhompyutha ephathekayo ejwayelekile, ngisho ukuthi inkulu
I-xubuntu ne-lubuntu zingakulungela. Bengisebenzisa i-xubuntu 14.04 futhi kahle nge-1 gigabyte yenqama ene-asus neetbook kusuka eminyakeni eyi-8 eyedlule. Sanibonani Jorge
Futhi kuthiwani nge-xpud? Iyashesha kakhulu futhi ihlukile ngandlela thile futhi kuthatha kancane ukuzivumelanisa nezimo, ikakhulukazi kulabo abajwayele ideskithophu.
Akukho okuningi okungenziwa, kepha ukuzulazula, ukusungula ingqungquthela yevidiyo usebenzisa i-Skype futhi usebenze ne-Open Office kwanele.
Ikakhulu lapho i-SSD yami ye-Acer iyeke ukusebenza.
UJuan Barra kusho
Kungadingeka ukukhuluma nge-athomu ye-ututo yalolo hlobo lweprosesa 🙂
Phendula uJuan Barra
Imininingwane yakho iyakhombisa kakhulu. Ngiyabonga
Nginenkinga nge-laptop yami, ngafaka i-UBUNTU 11.10, njengesicelo kodwa kuvela ukuthi ngokuqala kabusha nokungena kwi-fan kusebenza ngaso sonke isikhathi, okwenza i-PC yami ishise kakhulu, ngifisa ukwazi ukuthi lokho kwenzeka yini ngalawa ma-distros afakiwe lapha.
URaimundo riquelme kusho
Ngine-Ubuntu 12.04 ku-Samsung netbook yami futhi ngijabule kakhulu! Yize akukubi ukwazi ezinye izindlela 🙂 Ukubingelela
Phendula uRaimundo Riquelme
URicardo C. Lucero kusho
Ngine-netbook le-Samsung N150 Plus lapho ngivivinye khona Ubuntu 12.04 noJoly. Bayishumi! Manje sengine-Mandriva 12 efakiwe futhi ngiyithanda kakhulu… Ngiyisebenzisa nedeskithophu ye-KDE !!!
Phendula uRicardo C. Lucero
UDaniel Rossell kusho
IKuki Linux ayitholakali kuwebhusayithi esemthethweni, futhi noma ngabe bengicabanga kangakanani ngayo, angitholanga izixhumanisi zokuyilanda. Nginesifiso esisodwa futhi ngingathanda ukuzama lokho kusatshalaliswa. Ngabe ukhona owaziyo ukuthi ngingayilanda kuphi?
Phendula uDaniel Rossell
Ngabe i-ElementaryOS izowela kokunconyiwe?
i-OS eyisisekelo ingu-10! Ngiyisebenzisa kuyi-OS yami eyinhloko
Kufanele babone ukuthi ukuthuthukiswa kwe-ISIS kuhamba kanjani, bazodonsa amathe lapho bebona isis ... kumane kuyiyona distro ehamba phambili esebenza ku-UX nase-UI engicabanga ukuthi ikhona ku-linux, ngaphandle kokungabaza ukuthi abaphansi benza umsebenzi omuhle, kuyangidabukisa anginaso isikhathi sokunikela kepha kulokhu ngihlela ukunikela cishe ngama- $ 10 lapho isis iphuma ...
Ngine-Acer Aspire One, uncoma yiphi i-distro?
Bengihamba noLubuntu futhi bekunethezeka kuze kancane kancane kungithathe isikhathi eside ukulayisha yonke into, angazi ukuthi kungani.
Ngicabanga ukuthi uLubuntu uyindlela enhle. Ungazama futhi ngokususelwa ku-Openbox, njengeCrunchbang (ngokususelwa kuDebian) noma uye ohlangothini olumnyama lombutho bese uzama i-Arch (yize ingeyabasebenzisi abaphambili kakhulu).
Ilahlekile okungcono kakhulu, IPhoyinti Linux enedeskithophu ye-MATE, ngokususelwa esitebeleni seDebian 7. 🙂
Kuyathakazelisa… bengingamazi. Ngizoyibuka.
Ngiyabonga ngencomo yakho yokuncoma, IPhoyinti le-Linux ngiyayihlola ku-Dell mini yami, futhi ihamba kahle, ingcono kune-Ubuntu, kepha lokhu kuthinta esikrinini uma kwenzeka wazi noma yikuphi ukuthuthuka kwalokhu, futhi umsindo kuzipikha ungihluleka , futhi iyasika kepha uma ngifaka ama-headphone akunankinga… Kuyafana ku-Ubuntu 12 kepha selokhu ngiyithengile ngasusa i-W7 eminyakeni emithathu eyedlule (ngisebenzisa i-Linux kusukela ngo-98 kodwa angiyena uchwepheshe… ake sithi umsebenzisi ojwayelekile »
Kokuhlangenwe nakho kwami, eminyakeni edlule basinikeze ama-netbook amaningi we-Asus EEE PC, aphansi kakhulu, iCeleron 700Mhz, i-512 DDR2 RAM, i-4 GB SSD disk kanye ne-7 ″ screen. Indaba emfushane, inketho engcono kakhulu ngaleso sikhathi kwakunguDebian nge-LXDE, sayilungisa kahle futhi sayinikeza isikole sasemakhaya. sibeka i-broadband yeselula ene-wifi nekhebula lenethiwekhi. Imishini sayifaka egumbini lekhompyutha futhi yilokho kuphela, konke kuxhunywe ngenethiwekhi ngephrinta ye-HP laserjet. kube nenkinga yokubuka amavidiyo e-youtube (ikakhulukazi ngenxa yeprosesa ye-EEE PC), ngakho-ke sibeka i-pc enamandla kancane nge-projektha ne-voila. Eminyakeni engu-5 edlule futhi amakhompyutha asasebenza kahle, sihamba kuphela izikhathi ezimbalwa ngonyaka ukuvuselela isiphequluli (i-Chromium) ne-voila. Ku-4GB ye-SSD, bekukhona okungaphezulu kokungu-1GB mahhala ezintweni ezahlukahlukene, ngoba amafayela avumelanisiwe kuseva emaphakathi.
Ngalowo mqondo, ukuguquguquka kweDebian kwazise amanye ama-distros angayithanda (futhi qaphela, ngenhliziyo yami nginguSusero / Redhatero)
Ngiphawula ngenhla, ukuthi ngizame ama-distros ambalwa ngama-lxde xfce desktops, njll .. futhi engimangaze ngokushelela kwayo, kubo bonke engibahlolile kwakungu-LUBUNTU .. Ngakuthola kungakholeki ukuthi ama-distros ane-desktop efanayo ( xfce) izosebenza ngokwehluke kakhulu.
Ngamafuphi, kunoma ngubani osebenzisa i-netbook noma amakhompyutha anezinsizakusebenza ezimbalwa ngincoma i-xfce, ngeke azisole.
Sawubona pansxo, ku:
Angibazi ngempela kepha kubonakala kimi ukuthi uLubuntu usebenzisa i-LXDE neXubuntu XFCE.
phezulu! isinambuzane esincane ekuphawuleni kwami ​​haha ​​lokhu kuyi-illukki, i-lubuntu isebenzisa i-LXDE
Kulungile, uLubuntu usebenzisa i-LXDE. 🙂
Bafowethu abahle, ngine-Acer aspire AO250 netbook futhi ngazama okulandelayo, Linux mint xfce; xubuntu 12.04, isisekelo os. Akungabazeki ukuthi iminithi emithathu ngamehlo avaliwe ngalokhu kudla kwe-128mb ekuqaleni sekukude kakhulu ukuthi imemori engaphansi iyangondla, manje ngalezi zinketho ngiphakamisa isinambuzane futhi ngizozama i-bodhi, imikhonzo u-Ariki
Mina, ngafaka iManjaro Xfce kwi-netbook yentombi yami. Ngiyenze ngezifiso ngezindikimba zeTrisquel ngoba uyithande kangcono. Iqiniso ukuthi libukeka lizinzile futhi lisebenziseka kalula; yena ngokwakhe uthi waqala ukuthanda iGNU / Linux. Inkinga enginayo kuphela ukuthi izinkinobho zokukhanya kwesikrini azisebenzi (ngazama izixazululo zeposi lapha kepha lutho) noma kunjalo akubalulekile.
Okuthile okufanayo kwenzeke kimi nodadewethu, nge-samsung netbook .. kunika izinkinga ngokukhanyisa, inkinga ukuthi, uma uvula ilaptop ngebhethri, ivuleka njengakwindlela yokonga elula futhi awukwazi ukuyilayisha ngesandla, okuwukuphela kwesixazululo ukuyivula futhi ngamandla axhunyiwe, bese uyisebenzisa nebhethri, ngaleyo ndlela ugcine ukukhanya kuphezulu.
Kungihlabe umxhwele ukungabi bikho kwabanikeza kwesokudla i-KDE ne-plasma-netbook yayo. Ngisebenzisa i-chakra futhi iqiniso ligijima kahle kepha okungcono nge-2GB ye-RAM
... ngombono wami, ovela esikrinini esingu-10-intshi, i-plasma-netbook ibingabonakali neze idingeka. Kudeskithophu noma kumodi ye- "Pc" konke kubukeka kukuhle.
UJoli Cloud akazange anqanyulwe muva nje ?!
Hhayi ukuthi ngiyazi. Isayithi lisasebenza futhi alisho ukuthi limisiwe.
Ngikhumbule ukuyifunda ...
Izindaba ezibuhlungu, bengingazi.
En http://jolios.org/ ayisho lutho mayelana nokuthi iyekiwe ... kahle ... angazi.
Mina nodadewethu sinezincwadi zamabhuku, esikhathini esingaphansi kwenyanga edlule ngafaka uLubuntu, ngenxa yokuthi wakhathala ngamawindi anciphisa umshini wakho kakhulu, muva nje wamshayela ucingo wangitshela ukuthi usevele ujwayele i-OS nokuthi izinhlelo zivulwa ngokushesha futhi ngokuvamile ziziphatha kahle.
Ngokwami, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngafaka i-Debian + LXDE kwi-netbook yami, futhi isebenza kahle: iyashesha, isebenza kahle, inakekela izinga lokushisa futhi ngiyayithanda. Ngaphambi kokuthi ngifake iManjaro + LXDE (inguqulo yomphakathi) kepha ayizange isebenze kahle, igundane linqamukile ngaso sonke isikhathi, lashisa kakhulu futhi ngokujwayelekile ushintsho alungivumelananga, kuzoba ngoba sengijwayele iDebian nge-PC yami yedeskithophu Kunoma ikuphi, ngizonikeza uManjaro elinye ithuba kodwa kwi-PC, futhi kulokhu ngohlobo olusemthethweni.
ILubuntu iyindlela enhle, kepha kubuhlungu ukuthi inguqulo yamanje "13.10" inenkinga enkulu ngeXscreensaver futhi inkinga ukuthi ayiyilethi futhi isikrini siba mnyama ngemuva kwemizuzu emi-3. Futhi noma ngabe ufaka iXscreensaver ejabulayo, ayenzi sebenzisa izinguquko
ISlitaz, ama-35 MB
Ngangazi ukuthi ngiphuthelwa okuthile ... 🙂
ISlitaz inketho enhle kakhulu ...
Ukungena okuhle kakhulu.
Sawubona, ngiyaxolisa kepha isixhumanisi seGoogle Chrome OS akusona esifanele, siyisixhumanisi esiya eCr Os, asifani.
Kunezinto eziningi ebengingazazi, ikakhulukazi iBodhi Linux, akukaze kube buhlungu ukuzizama
kepha ebhukwini lami ngithanda i-lubuntu, iyona emfanela kahle best
I-netbook yami ifike ne-SUSE Linux 11 ekuqaleni, iyiCompaq Mini CQ10-811LA, yangibiza ngamathe angu-800 eminyakeni emibili eyedlule, ngemuva kwesikhashana ngangifuna ukushintsha, ngangingazi nakancane ukwenza izipele noma yini ngakho ngazethula, uma ngenza umsebenzi ongenakwenzeka ngoba bengingakwazi ukuqala i-USB, ngemuva kwesikhashana ngithole ubuqili, ngemuva kokuthi i-UnetBooting ilayishiwe bekufanele ngicindezele noma yimuphi ukhiye bese kuphela lapho ngiqale khona, ngafaka i-EasyPeasy njengoba bekuyiyona kuphela ebhuthayo (ekuqaleni bengicabanga okwakuyisimangaliso, kepha ngathola ubuqili futhi bengizama amanye ama-distros), kepha i-wifi yami ayingibonanga futhi bekufanele ngisebenzise ikhebula.
Ngikhathele futhi ngafaka i-OpenSuse 12.2 KDE, ibimaphakathi, kepha angizizwanga ngikhululekile.
Ngithole uFuduntu futhi… ngangisemathandweni, konke kwakusebenza kahle, ngisho nebhethri lahlala isikhathi eside, itrackpack yasebenza kahle futhi inembile, iLibreOffice yaletha imithombo enobungani kepha iphrojekthi yaqedwa futhi lapho ngingatholi noma iyiphi i-distro engiyithandayo ( Kubuntu, Lubuntu, Linux Mint, Puppy, OpenSuse) Nginqume ukufaka iWin7, nangu nami.
Muva nje ngihlela ukufaka uLubuntu kwi-netbook yami ngesahlukaniso bese ngiqhubeka nokuzama abanye ngize ngithole okunginika lowo muzwa uFuduntu anginike wona
Phambili! Kufanele uqhubeke uzama ... 🙂
Hhayi ... ngisebenzisa kakhulu le netbook engibhala kuyo. I-Intel Atom 64 bits - 1,6 Ghz ne-2 Gb ram. Ngangihlala ngine-debian, futhi yize ngangazi ukuthi bekungahle kahle ekuqaleni, ngakhetha ukubeka i-KADE ku-Wheezy -kernel 3.2 ne-kde 4.8-. futhi ngihamba. IDolphin ithatha imizuzwana emi-3 noma emi-4 selokhu uyiqalisile? yebo ... bese kuhamba kahle. I-Icewesel isivele ithathe isikhathi eside ... cishe amasekhondi ayi-10 ... kepha njengoba kungu-27 ukulayishwa kuwebhu kuyashesha kakhulu. Kukhombisa ukuthi kuyashesha ukwedlula lokho iprosesa yami engakuvumela. Ngisebenzisa iJava ne-clementine, futhi yonke into ivulekile eKADE futhi ayidluli i-1,6 ram .. futhi nge-libreoffice, ngikhohliwe.
Manje usune-debian sid -kernel 3.12 ne-kde 4.11- nayo yonke into ethathiwe (ebingathathi isikhathi eside) isikwe ezimweni eziningi ngesigamu.
Isimilo: ideskithophu elula (i-lxde, noma uma ufuna i-openbox kuphela) ngeke ivikele izinhlelo ezinjengeziphequluli, ama-offimatics, ezisebenzisa iJava noma idizayini egijima ngokushesha.
Ngakho-ke, uma une-2 Gb yenqama, ungafaka kalula i-kde noma i-gnome ngaphandle kwezinkinga ezinkulu (yize kubonakala kimi ukuthi i-gnome idla kakhulu, angikhumbuli ukuthi kungani ngiyizamile kancane).
Lokho kungukuhlangenwe nakho kwami ​​futhi kuyiqiniso. Kuthiwani uma kune-kernel enhle ku-arch ehlanganiselwe i-netbook engiyibone kudebhu kepha ngama-32 bits. Lokhu uma kungasiza ukusebenza ngokujwayelekile, hhayi esikhundleni sediski nedeskithophu yakho.
Ngikhohliwe ukuphawula ngeqiniso elilodwa elibaluleke kakhulu. Izinga lokushisa lingaphezu kuka-40 C nangaphansi kuka-50 C ngaphansi kwezimo ezijwayelekile. Ibhethri ngemuva konyaka liqhubeka nokuhlala kimi ngaphezu kwamahora amathathu njengoba lenzile ekuqaleni. Akunankinga kulezo zinto. Abaphathi babonakala behle impela !!
Ngithole lesi sihloko sithakazelisa kakhulu. Iningi lokwabiwa ebengingakwazi ngaphandle kweManjaro neChromOS. Ngizozihlola njengemishini ebonakalayo ukubona ukuthi zibukeka kanjani kimi.
Kuhle! Lowo kwakungumqondo. Bakhuthaze ukuthi bazame ama-distros amasha. 🙂
Mina ngama-netbook noma i-cruchbang noma i-Archbang zombili zibonakala zinhle kakhulu, ngokunambitheka kwami ​​zilayishwa kakhulu ngamaphakeji
Kimi, i-Archbang ihlanganisa okuhle kunakho konke imihlaba. Kuyindlela enhle. Ngingacishe ngibe nesibindi sokusho ukuthi elinye lama-distros amahle kakhulu (alula).
Ngafaka i-linux mint ethangeni lami le-HP G42 ngoba ngangicabanga ukuthi kukhanya ...
Ucabanga ukuthi yini enhle? noma ingabe kukhona okunye okuncoma kulokhu okuthunyelwe noma yikuphi?
engikufuna ukusebenza, uyazi, isivinini njll.
i-elementaryOS kwi-netbook isebenza kahle impela, impela, ngemiphumela ekhubazekile, izithunzi nakho konke lokho, kepha kusese kuhle ... iqiniso ukuthi, (akunacala) njenge-miniMac kepha iyasebenziseka.
Mhlawumbe kungenxa yokuthi icishe yabhalwa eVala, kepha ngiyayincoma kakhulu.
Ngikhohliwe, ukuzama i-Android ye-PC ne-Chrome OS, ngifuna ukwazi ...
Kuyathakazelisa! Siyabonga ngokushiya umbono wakho.
i-elementaryOS ifana nosilika, konke kusebenza kahle.
Ngiyabonga ngokuhlanganiswa, njengoba i-hard drive yami ye-hp mini ishile, ngivivinya ama-distros, iningi lawo lihluleka ngokuxhumeka kwe-wifi, ngiwasebenzisa ngokubhutha kusuka ku-pendrive, ngithanda ukusho ukuthi uma ngiwafaka bekuyi-wifislax esebenza ngo-100% nge-wifi kepha ayinalo ihhovisi elivulekile noma ihhovisi lamahhala, angiqondi okuningi mayelana nokuphikelela kepha angikwazanga ukugcina izinguquko engizenzayo ukuphikelela lapho ekugcineni ibuza ukuthi ufuna ukuthi ushintsho lutholakale ngezikhathi ezizayo? ukusebenza ku-inthanethi kulungile.
Ngizozama konke okubalwe lapha, imikhonzo, qhubekani ngibonge ngolwazi.
UWilson Cortegana kusho
Sawubona, ngithemba ukuthi bazongiphendula haha, kahle ngine-samsung N102SP netbook, ngafaka i-ubuntu 13.10 ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi iqiniso ngangidumele ngokusebenza (super slow, more than when I had windows7), manje ungazisa ngalezi distros, ngifisa ukwazi okungafaneleka ngokwengeziwe.
Phendula kuWilson Cortegana
Ngincoma i-linuxmint 16 nge-xfce desktop. Kuyi-distro ephelele kakhulu enezindawo ezilula kakhulu futhi ezinamanzi amaningi. Impela le distro ayikudumazi. Ngenhlanhla!
Nami nginayo leyo netbook, ngafaka iCrunchBang 11 futhi ayikwazi (noma kunenkinga) ekhadini lenethiwekhi, ngibe sengifaka iLubuntu kodwa bekufanele ngilande abashayeli. Manje sengikhethe i-Elementary OS, sengivele nginakho ukuthi kuhamba kanjani.
Sawubona, ngimusha lapha kade ngifunda okuthunyelwe nokunye ukuphawula, ngithanda ukuthi uncome i-distro ethile ye-netbook yami. I-Packard Bell dot se2, eneprosesa ye-Intel atom n570, 1gb DDR3 RAM, Windows 7 ... Ngiyethemba uzongisiza ngoba nginenkinga encane lapho ngikhetha efanelekile, inkinga nge-netbook yami ukuvulwa kancane kwezinhlelo namakhasi ewebhu futhi uhlale ubambekile.
Ngincoma i-linuxmint 16 x86 nge-xfce desktop. Kuhlolwe ku-netbook enezici ezifanayo.
Zama i-elementaryOS bese ushintsha iMidori ufake iChromium. Ukundiza!
Umnikelo omuhle kakhulu, ngizohlola uLubuntu kulencwajana yokubhalela eyi-1GB RAM.
I-Psdt: Ungangeza iDamn Small Linux, i-distro engu-50 MB kuphela; Halala!
Ngabe uncoma yiphi i-distro yeToshiba NB50 ene-2GB (enwetshiwe) ngeprosesa eneminyaka engu-4 ubudala?
Uma kuyi-chrome OS, ngiyivula kanjani?
kancane, ucabanga ukuthi iPoint Linux izohamba kahle kwi-netbook yami (iToshiba NB250) nge-Intel Atom processor eneminyaka engama-4 futhi eyi-petadisc eyedlulele?
Salamdreate and salamandreo eceleni ukuthi intulo intulo futhi ngincoma salamandri 92.4 ukuthi intulo intulo wena intulo
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule bengifunda yonke into ephathelene neLinux, njengomsebenzisi weWindows ngazizwa ngingenandaba ngakho kepha kufanele ngithi nginomdlandla omkhulu futhi ngifuna ukuqala ukusebenzisa futhi ikakhulukazi ukuhlola i-Free Software universe ye inani elikhulu lamathuba elihlinzekayo, futhi ikakhulukazi ngesimo somuntu sale mibono yokwabelana ngolwazi ukuze kuzuze sonke isintu, ngenxa yomnikelo, imikhonzo.
Sawubona, uncoma ini nge-1gb ram netbook ne-1.6GHz mono core processor? Bengicabanga nge-ELementary OS.
Elementary Os… iyi-distro enhle kakhulu… incane kakhulu futhi iyaheha. Kepha ngeshwa ngehardware yakho angiyiboni njengenketho enhle kakhulu ngoba iyideskithophu ebiza kakhulu kunezinye ezifana ne-lxde noma i-xfce. Uma ungakhathali kangako ngalesi sici, ngincoma ukuthi u-lubuntu nge-lxde desktop, okulula kakhulu engizamile kuze kube manje .. Uketshezi kakhulu lwemishini ene-hardware encane noma njengenketho yesibili kepha i-tad ifuna kakhulu kune-linuxmint yokuqala ene-xfce desktop ngombono wami iyakhanga kune-lxde kepha ngiphinda i-tad ebanga kakhulu izidingo. Ngiyethemba unenhlanhla futhi usitshele ukuthi kanjani.
UJose J Gascon kusho
Ngizamile ukusatshalaliswa okuningi kwe-linux kwi-Netbook kusuka ku-Mint, nge-Debian, Android, njll. Ngibe nenkinga ngokukhanya kwideskithophu, ngaze ngazama iLinux Ultimate Edition 3.8 http://ultimateedition.info/, isebenza ngokushesha futhi uma ungalithandi ideskithophu ye-Mate, ngokwenza ku-terminal sudo apt-get ukufaka i-gnome, faka ideskithophu ye-gnome, nge-gnome fallback kanye nendiza ye-gnome fallback engenazinsimbi, ne-gnome 3, nokuthile okufana nobunye noma ubunye ngaphezu kwe I-Xbmc eza njengohlelo olujwayelekile futhi ikwenza kube lula kakhulu ukukusebenzisa, uma okufunayo kuyi-Xbmc yesikhungo sokuzijabulisa sasekhaya, ngalokhu unemihlaba emi-2, uma unesithukuthezi nge-xbmc ungasebenzisa wonke amandla ekhompyutha ngokuyihlelela ku Izidingo, zilungiswa ngokungenamkhawulo.
Ngiyisebenzisa kwi-netbook ye-Gateway LT4002m, benginephutha futhi ngafaka i-edishini yokugcina engu-3.8 amd64, i-netbook ingama-32 bits futhi isebenza kahle
UJose J Gascón
Phendula uJose J Gascon
Ama-Celso mazariegos kusho
Ngibonga kakhulu ngezeluleko zakho.
Njengamanje kukhompuyutha yami ephathekayo ngisebenzisa iXubunto 10.2.
Ngeseluleko sakho ngizofaka iLUBUNTU-14.04. Ngizobona ukuthi kuhamba kanjani.
Phendula kuCelso Mazariegos
Ngisebenzisa iLinux Mint 17 Mate futhi isebenza kahle kakhulu.
Ngingazama i-Chrome OS, kepha njengoba isebenza kuphela ukuzulazula hhayi okunye, ngaphandle kokukwazi ukufaka amaphakheji nezinto ezinjalo ...
Sanibonani nonke, ngakha ukusatshalaliswa okubizwa nge-Xanadu Linux kumakhompiyutha anezinsizakusebenza ezimbalwa ezisuselwa ku-Debian SID, iku-beta, uma noma ngubani kini efuna ukuyihlola futhi anikeze umbono wakho, izokwamukelwa kahle, nali ikheli kusuka lapho ingalandwa: https://xanadulinux.wordpress.com/
kulungile. Ngizozama. ngiyabonga!
UDennis L. kusho
Uma benza ukusatshalaliswa okungashisi i-laptop kakhulu, lokho kuzoba ukusatshalaliswa kwami ​​Haha
Phendula uDennis L.
Yebo, ngine-HP endala, iyi-hp elitebook 6930p, enhle kakhulu futhi isebenza kahle kakhulu ngeWindows, ngoba lapho izama ukusatshalaliswa okwehlukile kweLinux, kungaba yiFedora, iLinux Mint, Ubuntu, iXubuntu, iKali, Elementary, iDebian , futhi konke okunomphumela ofanayo, ilaptop iyashisa kakhulu ... Kuyaxaka ngoba ngeWindows lokhu akwenzekanga, futhi akwenzeki njengoba ngiyifakile ekwahlukaneni. Noma ngubani uyazi nganoma yikuphi ukusatshalaliswa okungabangeli lokhu ?? Sengikhathele ukuzama nokuhlola futhi kuyefana nakho konke ukwabiwa… Noma yiluphi usizo ??
Futhi okwenzekile ku-lxle okungcono kakhulu kune-lubuntu nabanye, ukubuyekezwa kwe-LXLE kungaba kuhle http://lxle.net/
Kuyathakazelisa ukuthi okwamanje anginayo "ikhompyutha", i-netbook eyi-1.66 GHz eyisiphukuphuku ne-1 GB ye-DDR2 RAM, ngokusetshenziswa kwezinsizakusebenza, ngabe umehluko omkhulu kangakanani phakathi kwe- "pure" arch linux, manjaro ne-crunchbang?
Akekho okhuluma nge-Elive ???
crunchbang ngaphandle kokungabaza the best of the best….
Impela okungcono kakhulu, ngiyifakile ngase ngiyikopisha kwi-USB, ukuze ngikwazi ukuqala ama-PC amaningi, ngiyisebenzisa ku-Thinkpad T43.
Sanibonani, ngine-mintosx, iyi-linux emathangeni angama-64 futhi ingcono kune-win 7 futhi ngiyamangala ngejubane layo, lapho ngivula amawindi amaningi, ne-deepin 2014.1 futhi ibuye ibe nkulu.
Sicela uncome ukuthi iyiphi okufanele ngiyisebenzise. Ngifuna i-linux distro
lokho akunankinga yokukhanya, futhi lokho kungivumela ukuthi ngiguqule ukukhanya
kalula, ikakhulukazi kumakhompyutha anememori engaphansi kuka-400
Sawubona kusihlwa, bengilokhu ngishaywa isoftware ekhanyayo yemishini yokucacisa okuphansi, futhi kube nesikhathi lapho ngibheja khona Ubuntu ne "gajethi" into engingakwazi ukuyenza manje, futhi iqiniso ukuthi ngihlukane neLinux ngenxa Lokho, angikhathali ukubeka eyodwa yalezi kuyo ngokwesaba ukubambeka ukuxazulula izinkinga ezincane.
okungenani lokho sekuxazululiwe ..
ILionofsnow Aterrazombies kusho
Sawubona, ngiyabonga ngolwazi. NgineWindi Lesishiyagalombili neZorin 9. Futhi landa i-OS exakile, ibizwa ngamaReactOs ... ngeshwa i- "live cd" yahlala isikhashana yenza okuthile ngehardware futhi angikwazi ukuyifaka (kulungile, yimina) . Ngabe othile ngicela angifundise ngale OS, ngiyabonga.
Phendula kuLionofsnow Aterrazombies
Imininingwane engaphezulu ku:
Okuhlangenwe nakho kwami ​​nge-second-hand Acer Aspire One D257 (iprosesa ye-Intel Atom, i-2 Gb Ram ne-hard disk engu-500 Gb), kwaba ukuthi lapho kuhlolwa iFedora 21 nge-Live CD ayizange iyibone ikhibhodi; ngakho-ke ngivivinye nge-Ubuntu 14.10 futhi bekungekho zinkinga ekubonweni kwekhibhodi noma kwi-Wifi, bekufanele sengeze ukuxhaswa kweSpanishi kuphela. Ngikhuthazwe yilokhu okuthunyelwe, ngisuse Ubuntu futhi ngafaka iLubuntu 14.10, okuthe ngaphezu kokuqaphela i-Wifi, ikhibhodi (ukwesekwa bekufanele kufakwe ngendlela elula), ngena ngemvume ngokushesha nangokubuka amavidiyo we-YouTube. Okwamanje konke kuhamba kahle.
Siyabonga ngokuthunyelwe kwakho namazwana akho, ayasiza kakhulu.
Sawubona, ngifisa ukwazi ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza oluhamba phambili kulo mshini
I-Intel® Atom ™ CPU N2600 @ 1.60GHz × 4
isekela i-x64 ne-x86
ngokusho kwe-linux umshayeli ocacile ayisebenzisayo yi-PowerVR SGX545
i-fedora x64 ukuphela kwayo enginike imvelo ye-gnome3 i-x enhle kakhulu
Ngingathanda ohambahamba nalo mshini ngoba isihloko sehluzo siyangicasula
I-athikili inhle kakhulu, ngivela kwiWindows futhi ngithatha izinyathelo zami zokuqala ngaphakathi ku-Ubuntu, emhlabeni weLinux, kuze kube manje zilunge kakhulu, izinkinga engikwazile ukuzixazulula ngokufuna imininingwane, ikakhulukazi ku-desdelinux, isikhathi abasithathayo siyaziswa.
Ngisebenzise i-crunchbang iminyaka emi-2 kwi-hp mini 110 ene-2gb da ram futhi ibishesha kakhulu, izinze ngamafuphi, iyigugu!
kepha ezinye izinhlelo beziphelelwe yisikhathi kanti ezinye bezingenakufakwa ngenxa entsha mhlawumbe ...
Noma kunjalo, ngibuyele emafasiteleni 7 kulowo mshini nge-bluetooth kuphela, kepha umsebenzi obekufanele ngiwenze lapho usuvele uqediwe, ngakho-ke ngibona ukusatshalaliswa okushesha njenge-CB noma ngaphezulu futhi lokho kungivumela ukuba ngibe nezinhlelo esanda kwenzeka ...
Yize kuthiwa i-netbook ukuhlola kuphela iposi noma ukufaka ingxoxo, ngicabanga ukuthi kunephutha ngoba ngesikhathi engiyisebenzisa ku-CB lowo mshini omncane wenza konke (ngokuya ngovunyelwe iprosesa) bekuyisikhungo semultimedia imali engenayo, umshini wami omncane… konke!
kepha njengoba ngishilo, i-CB indala futhi ngifuna into efanayo kodwa yesimanjemanje….
Ukuthi ngigcwalisa i-athikili, ngemininingwane kuzo zonke izinhlelo ezisebenzayo. Ngokwami, njengoba Izincwadi Zokubhala zine-RAM encane, Ubuntu busebenza ngokuphelele. Ine-interface enobungani futhi kulula ukuyisebenzisa. Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza, kumahhala ngazo zonke izinhlelo zokusebenza ezisezingeni eliphezulu.
Bangani, ngine-Dell Inspiron Mini 10V futhi kuyo, ngine-xPud efakiwe, futhi ngandlela thile ngiyisicefe ngoba uhlelo "oluhle" kodwa "lwesikhashana", alukho ushintsho olufakiwe nezinhlelo zokusebenza azikwazi ukufakwa futhi selivele limisiwe Iyiphi oyincomayo nge-netbook yami ye-Dell Inspiron Mini 10V. Halala!
isiphakamiso: phakamisa u-2, munye, okungcono kakhulu ngokusho kwezimpawu zenothi no-2, ezivumelanisa noma ezingafaka isoftware noma amaphakheji, lapho engingahlela khona ama-webs, i-html, i-php, njll kanye nomhleli wesithombe yilokho Ngikhathalela kakhulu, ku-xPud ngikwazile ukufaka isihleli sesithombe esifana kakhulu ne-Photoshop. Halala!
Ngizamile ama-distros amaningi ashiwo lapha futhi alungile, ngidinga ukuzama i-JoliOS ngoba ingenza ngikhange kakhulu, kepha-ke, ake ngikutshele ukuthi njengamanje futhi bengilokhu ngisebenzisa i-openuse, futhi ibuye ibe kanokusho
Ngisebenzisa i-chromebook, futhi iletha i-chrome os, kulungile, yisiphequluli esisheshayo nokuthi, azikho neze izinhlelo zokusebenza ezingaxhunyiwe ku-inthanethi futhi ezingikhathazayo. Njengoba kuza ngokuzenzakalela, ngiyesaba ukushintshela i-OS enye, engeke iqale phansi futhi cishe akukho okufundiswayo kokuthi ungayishintsha kanjani noma uyixazulule kanjani le hardware.
Ngincoma ukuthi uzame uma uzoba nayo kukhompyutha, ngokwesibonelo ekhishini, noma endlini yangasese, noma eduze kwe-TV egumbini lokuphumula. Inqobo nje uma kune-wifi, isebenza konke.
Ngine-acer aspire 3756z laptop, 15.6 screen, 4GB ye-RAM, Intel Pentiun dual core T4200 2.30 Gz processor, 300 GB hard drive.
I-openuse XD ngihlala ngiyincoma ukuthi ngineminyaka yokusebenzisa, ngiphinde ngazama i-Ubunku, Kubuntu, Fedora, mmm eziningana kepha ngithanda ukuthi ngokujwayelekile ngincoma wena nge-desktop ye-GNOME kepha bengilokhu ngiyisebenzisa i-KDE ishesha emshinini wami
Ngiyacela, kuyaphuthuma, umuntu angangitshela ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza zendabuko ezingafakwa njengaku windows !!!!!!!!!!
wonke umuntu. Kuzofanele udale ukwahlukanisa amawindi nokwandisiwe kwe-linux distro yakho, Ubuntu ilula kakhulu ngokuya nge-boot ebili
Okwenzeka kimi ukuthi izikhathi engizame ngazo i-linux sengibe nazo ngokwanele emahoreni ama-2, angikwazi ukusho ukuthi ngizame ama-distros amaningi (ubuntu ne-fedora) kepha into engihlanyayo ukuthi kukho konke ebengifuna ukukufaka nginakho landa enye into kuqala, noma faka imiyalo. Isici esisodwa samawindows engingakaze ngiwuthole kwenye i-OS ukukhululeka kokufaka uhlelo.
Nginesifiso se-acer nge-2gh ne-2gb yenqama, i-32gb eMMC. Ngamawindows isebenza kahle kepha ngesinye isikhathi iba namahits ayo ejwayelekile kusiphequluli se-inthanethi. Anginaso isikhalazo esikhethekile kepha ngithanda ukukhetha i-linux enikeza i-pc yami ukuthinta okwehlukile ngaphandle kwamazinga wewindows.
Kumele kuqashelwe ukuthi ikhompyutha iqondiswe eyunivesithi.
Uma othile othuthukile engangiphakamisa uhlelo lokusebenza olujwayela ubuncane bami ngingalujabulela, uma kungenjalo, ngizoqhubeka ne-win8.1
Hhayi-ke, ngincoma ukuthi uhlale neWindows yakho futhi ngikutshela ngenhlonipho, akukho okuzokushumayeza, noma ukwenza idimoni iMicrosoft. Ukuphawula kwakho kukhombisa ukuthi awulingani nendlela iLinux esebenza ngayo. Futhi imininingwane yile: Uyayifuna noma uyayizonda. Uma uyifuna, uzobheka ukuthi wazi kanjani ukuthi isebenza kanjani futhi uzobhekana nezinselelo zokufunda yonke into uma kungenjalo ... akuyona eyakho. Bengilokhu ngisebenzisa i-Linux kusukela ngo-1998 kudeskithophu yami kuphela. Ngino-Dell omncane osebenzisa iWindows (futhi usebenzisa isoftware yamahhala) iWindows Phone ne-Android futhi anginankinga nokusebenzisa ngayinye ngokwesidingo sami. Ungayithathi ngendlela engafanele, kufanele ukwamukele ukuthi uma uyifuna, uzobheka ukuthi ungayazi kanjani futhi uyivumelanise nezidingo zakho.
mngani omuhle ngizozama i-zorin you lite ukubona ukuthi injani kwi-laptop yami encane ngizokutshela
Zama iBodhi ngenguqulo entsha ubuhle emishinini enezinsizakusebenza ezimbalwa, kubuhlungu
Sawubona wonke umuntu:
Bengifunda ukuphawula kwakho, ubunzima bami obukhulu kimi, ukuthi ngine-HP pavilion dv1010la AMD Athlon, ene-2 ​​GB, ukusetshenziswa kwebhethri lelaptop, elihlala isikhathi esingaphezu nje kwehora, njengamanje ngisebenzisa i-CUB Linux (Ubuntu ngokubonakala kwe-Chrome OS), kepha ngithanda ukwazi ukuthi ikuphi ukusabalalisa okuphumelela kakhulu ekusetshenzisweni kwebhethri, futhi uma kungenzeka, ngitshele ukuthi uhlobo lweprosesa lukuthonya kangakanani ukusebenza kwe-distro.
UJose Vega kusho
Kunganjani, ngoba muva nje ngazama izinhlobo eziningi ngazilayisha, ngazishisa ngaze ngaphelelwa amadiski hehe, ngabe sengizifaka ku-usb ngaze ngathola ezingcono kakhulu ze-hp 1100 netbook ene-athomu ne-1 gb yenqama, i Abangisebenzele kahle kakhulu bekuyi-Elementary (elementary-os-freya-32-bit-multi-ubu), ubuntu netbook edition (ubuntu-netbook-edition-10.10) kepha ukwesekwa sekuvele kumisiwe ngakho-ke nami ngakushintsha, Kali (kali- linux-2016.2-i386) lihle kakhulu kepha iqiniso lalingeke lisebenzise wonke amathuluzi alo ekugcineni ngahlala noPepermint (Peppermint-7-20160616-i386) noma ibaphi kulabo engangibona ikhadi lenethiwekhi elingenantambo futhi lisebenza kahle, kwesinye isikhathi okuyisisekelo bekuhamba kancane, kepha ukusebenza kukonke kuhle kunoma iyiphi i-distro.
Phendula uJose Vega
Ngicela ungitshele ukuthi iyiphi inketho ye-linux ehamba phambili ye-dell i5 6gb ram 350 hd laptop
Sawubona, nginombuzo. Angisiye umsebenzisi we-linux ojwayelekile, futhi ngine-netbook yakudala (cishe iminyaka eyishumi ubudala) egijime ku-XP, kepha idiski ishile. Manje ngifuna ukufaka i-OS ethile ukuze ngiyisebenzisele ukuntweza inetha. (Ngikhuluma nje, ikhehla lami elineminyaka engama-10 ubudala lizolisebenzisa futhi lizolisebenzisela ama-imeyili kuphela, lifunde amaphephandaba bese libhala umbhalo ongajwayelekile.)
Ngizamile ukufaka iLubuntu enconyiwe lapha futhi konke bekuhambe kahle ngaze ngathola umyalezo wephutha wokuthi ukufakwa kwe-Grub bootloader kwehlulekile.
Manje, i-OS yayimaphakathi lapho futhi angazi ukuthi ngingawenza kanjani usebenze ...
Manje umbuzo. Ngabe uLubuntu uzosebenza ngomshini omdala kangaka? Ingabe uncoma noma iyiphi enye i-distro elula futhi enobungane?
Nazi izici zenetha: I-HP Mini 110-1020la Netbook, Intel Atom N270 Processor (1.60 GHz), 1GB DDR2 Memory, 10.1 ″ WSVGA Screen, 160GB Hard Drive, 802.11b / g Network, Windows XP Home SP3.
Okuthunyelwe okuhle kakhulu! Ngizozama okunye ukufundwa ngikuhlanganise nalokho kwaleli webhusayithi: https://andro2id.com/mejores-distribuciones-linux-ligeras/
UJose Luis Gomez kusho
Ngikhathele ukuzama i-linux distros, ku-exo 355 kahulumeni wase-Argentina, nge-2g yenqama engiyengeze x eza ne-1g. futhi i-distro esebenza kahle kakhulu ngejubane eliqinile, ukuzinza futhi ngoba inabo bonke abashayeli yayiyi-linux mate 3.2 ipayipi kukho konke isebenza ngokuzinzile futhi idla ngesidlali somculo ne-firefox ku-facebook ngokuphelele, ayifinyeleli kuma-megabyte angama-500 inqama, ngokusho koqapha uhlelo, ithola i-wi-fi, nakho konke ongibeka khona, kulolu hlobo lomshini, i-distro ehamba phambili ngokususelwa ku-debian… ..
Phendula kuJose Luis Gomez
Ingxenye Yesibili Izinhlelo Zokuhlola ze-Debian + Mate +
ISuperTuxKart 0.8.1 ifike ilayishe izindaba